FIVAVAHANA ISANANDRO HO FIAROVANA! – filazantsaramada
Publié parfilazantsaramada	 octobre 30, 2015 Laisser un commentaire sur FIVAVAHANA ISANANDRO HO FIAROVANA!
« Na dia ny liona tanora aza tsy ampy hanina ka noana; fa izay mitady an’i Jehovah kosa dia tsy orin-java-tsoa akory. » Salamo 34:10
***Maro ny zavatra azon’ny olona tadiavina eto amin’izao tontolo izao ity, ary tsy miafina fa vao mifoha maraina ny olona dia mitady ny mahasoa azy mandra-pilentiky ny masoandro. Misy aza ny miaritory amin’ny fitadiavana! Ny teny ombieniombieny dia ny hoe: sarotra ny fiainana!
***Ny ambaran’ny Soratra Masina eto dia ny liona tanora! Ny liona tanora tsy ampy hanina ka noana. Voalaza fa ny liona no mpanjakan’ny biby! Izany hoe izy no biby mahery miady noho ny biby hafa rehetra, kanefa na dia tahaka izany aza ny heriny dia mety hisy fotoana tsy mahita biby hafa atao remby izy, ary mety ho noana ihany, fa ny olona izay mety ho osa ihany na voafetra ny heriny dia tsy ho orin-javatsoa akory raha mitady an’i Jehovah!
***Tena mitady an’i Jehovah marina tokoa ve ny olony? Sao dia fitadiavana ho amin’ny filàna ihany, sa olona tena mitady an’i Jehovah ho fialofana marina, ka na amin’ny mora na amin’ny fotoan-tsarotra dia Jehovah marina no tena fiainana!
***Ohatra iray ao amin’ny Soratra Masina ny amin’ilay vehivavy nahery nangataka ny rariny tamin’ilay mpitsara tsy matahotra an’Andriamanitra, ary noho ny faharetany sy fikirizany nangataka dia nohenoin’ilay mpitsara ihany. Mihoatra noho ny fitadiavan’ity ramatoa ity ny rariny amin’ilay mpitsara tsy matahotra an’Andriamanitra no tokony hitadiavan’ny olona an’i Jehovah! Fa izay mitady an’i Jehovah dia tsy ho orin-javatsoa akory, aoka ny olon’Andriamanitra hivavaka ka tsy reraka! Moa va Andriamanitra hitaredretra raha mitaraina Aminy andro aman’alina ny olony? Anefa hahita finoana amin’izany ve Izy?
Publié parfilazantsaramada octobre 30, 2015 Publié dansUncategorized